Muqdisho:-Saraakiisha AMISOM iyo kuwa DFKM ayaa maanta geeyey horin saxafiyiin ah fariisimo ay ka qabsadeen jimcihii la soo dhaafay Al-Shabaab waxaana ka mid ah xarumaha la geeyey saxaafada xarunta jaamacadda Muqdishoiyo qubuuraha Bakaraat ee dhinaca waqooyi ee magaalada Muqdisho.
Madaxada DFKM ee horkacayey saxafiyiinta waxaa ka mid ah wasiir u dowlaha wasaaradda G/dhiga Maxamuud Macallin Nuur, abaanduulaha ciidamada DFKM C/kariin Yuusuf Aadan (Dhego-badan)iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha Degmooyinka gobalka Banaadir .
Waxaa xarunta jaamacadda Muqdisho kula hadlay warbaahinta abaanduulaha ciidamada DFKM Gen C/kariin Yuusuf Aadan (Dhego-badan) wuxuuna sheegay in ay goobo badan kala wareegeen ciidamada Al-Shabaab wuxuuna sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka inta dalka oo dhan laga saarayo Al-Shabaab.
Gen C/kariin Yuusuf Aadan (Dhego-badan) ayaa sheegay in ay u talaabi donaan hada wixii ka danbeeya goobaha ka baxsan Muqdisho si loo yareeyo weerarada ay soo qaadaan Al-Shabaab. Dhinaca kale afhayeenka ciidanka AMISOM Paddy Ankunda ayaa isna la hadlay saxaafada wuxuuna sheegay in ay haatan gacanta ku hayaan xarunta jaamacadda iyo qubuuraha Bakaraat ee dhinaca waqooyi ee magaalada Muqdisho.
Ururka Al-Shabaab ayaa wili ka hadal guulaha ay sheegteen ciidamada AMISOM iyo kuwa DFKM marka laga reebo dagaalo iyo weeraro ay xalay iyo habeen hore ku qaadeen goobaha ay haatan ku sugan yihiin ciidamada AMISOM iyo kuwa DFKM.